सम्पादकीय दमकमा सुकुमवासीसँग राक्षसी व्यवहार दमकमा सुकुमवासीको बस्ती दन्त्यकथाका राक्षसकै शैलीमा विध्वंश गर्नु अनुचित
बाह्रखरी - आइतबार, चैत २९, २०७७
‘सपिङ कम्प्लेक्स’ बनाउने भन्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर झापाको दमकमा पर्ने हाटखोला र पञ्चमुखीका २० परिवारको वास उठाइएको छ । उनीहरू करिब चार दशकदेखि त्यस ठाउँमा बसिरहेका थिए । बिचल्लीमा परेका परिवारको बसोवासको व्यवस्था मिलाउन भने सरकारले चासो पनि देखाएको छैन ।
यसरी घरबार भत्काइदिँदा त्यहाँ बस्ने बालबालिका, बूढापाका, अपाङ्गता भएका, सुत्केरी र गर्भवतीजस्ता कमजोर अवस्थामा रहेकाहरूको दयनीय अवस्था हुन्छ । मानवीय बिचल्लीको उपेक्षा गरेर गरिने कथित विकास जनविरोधी हो । दमक नगरपालिकाले तिनको उठीवास लगाएर त्यस्तै जनविरोधी ‘अपराध’ गरेको छ ।
नगरपालिकाको यस निर्मम काम सुन्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सम्झने अनुहार भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीकै हो । घटनास्थल प्रधानमन्त्री ओलीको गृह नगर त हुँदै हो गरिबको उठिवास लगाएर सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने ‘भुइँफुट्टा’ विकासको सोच पनि तिनले ओलीबाटं सिकेका हुनुपर्छ ।
नेपालमा अहिले सयौंका सङ्ख्यामा अग्ला डाँडामा कथित ‘भ्युटावर’ बनाइएका छन् । खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, अस्पताल, विद्यालयजस्ता अत्यावश्यक मानवीय सुविधाको विस्तारमा भने टावरे टोलीको ध्यान गएको देखिँदैन । यस्तो शैलीको कामलाई विकास भन्नु नै पाखण्ड हो ।
भ्यु टावरजस्ता भौतिक संरचना बनाउँदा पाइने कमिसन र ‘कीर्ति’ रचेको ठान्ने मानसिकताले जनजीवनसँग सरोकारै नराख्ने बिजनेस कम्पलेक्सजस्ता भुइँफुट्टा काम सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्छ । विकासको यो ढाँचाबाट गरिब र समग्रमा बहुसंख्यक जनताको हित भने हुँदैन । सपिङ कम्प्लेक्स बनाउनेजस्तो काम त आवश्यक र नाफा हुने भए निजी क्षेत्रले नै गर्न सक्छ ।
सपिङ कम्प्लेक्स बनाउनै परेको भए पनि त्यहाँका बासिन्दालाई सम्झाइबुझाइ गरी उचित क्षतिपूर्ति दिएर अन्यत्र सार्नुपर्थ्यो । तर, राज्यका अरू निकायले जबर्जस्ती गरे पनि संरक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिकाले नै बल प्रयोग गर्ने बाटो रोज्यो । यसैले यस कृत्यमा अमानवीय राक्षसी प्रवृत्ति झल्किएको छ ।
आफ्नै गृह नगर भएकाले पनि ती बिचल्लीमा परेका परिवारको बसोवासको प्रबन्ध मिलाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको कर्तव्य हो । उठीवास लगाउने काम उनको जानकारी र सहमतिमा नै भएको होइन भने त झन् उनले तत्काल हस्तक्षेप गरेर तिनलाई थप कष्ट भोग्नबाट जोगाऊन् । साथै जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नहुने र कमिसनका लोभमा गरिने यस्ता भुइँफुट्टा काम रोकून् । नेपालको विकास प्राथमिकता मानवीय आवश्यकता हुनुपर्छ ।
आइतबार, चैत २९, २०७७ मा प्रकाशित
अत्यावश्यक उपभाेग्यका सामग्रीका पसलमा हुने भिड र त्यसबाट सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न किनमेलकाे समय बढाउनुपर्छ । १७ घण्टा पहिले
खोप कमिसन काण्डको छानबिन गर
महामारीको सङ्कटलाई समेत कमाउने मौका बनाउन खोज्नु मानवताविरुद्काे दण्डनीय अपराध हो । बुधबार, वैशाख २२, २०७८
प्रधानमन्त्रीले बोलेको पुगोस् !
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतासामु गरेका वाचाले आशा जगाए पनि उनको विगतका पत्याइ हाल्ने ठाउँ भने देखिँदैन । मंगलबार, वैशाख २१, २०७८
लुम्बिनीको (अ)राजनीतिक पाखण्ड
नैतिकताहीन राजनीति अधर्म नै हो र ढीलोचाँडो परास्त त हुन्छ तर त्यसभन्दा पहिले देशमा कतै ठूलै अनिष्ट नहोस् ! सोमबार, वैशाख २०, २०७८
मजदुर र रोजगारी दुवै जोगाऊ !
मजदुरलाई सजिलोसँग काम गर्ने र काम गर्न नपाएका बेलाका लागि भोकै बस्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यका लागि असम्भव हुँदैन । आइतबार, वैशाख १९, २०७८
स्थानीय तहले ‘धर्म’ नछाडून् !
सत्तारुढमात्र हैन विपक्षीले पनि जनताले पाएको सास्ती र महामारीमा समेत राज्यको ढुकुटीमा भएको भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रूपमा नलिएकाले अहिलेको अवस्था उत्पन्न... शनिबार, वैशाख १८, २०७८